Soo ogow waxa ay macaamiisha kaa sheegayaan adiga
Xarunta Sirdoonka Macaamiisha Lithium: Laga bilaabo Macaamiisha ilaa Superfans
Khamiis, Juun 26, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Adduunyada maanta bulshada dhex-dhexaad ka ah, waxa macaamiisha ay ka sheegaan astaanta waxay dhalinayaan kala-goyn aad uga badan xayeysiis kasta ama maaddooyinka lacagta lagu bixiyo ay bixin karaan. Maaha wax lala yaabo in suuqleyda dhagaha dhagaha ka furaan si ay isugu dayaan una fahmaan waxa macaamilku ka sheegayo astaanta bulshada dhexdeeda. LithiumXalalka dhabta ah ee lasocodka warbaahinta bulshada ayaa u ogolaanaya suuqleyda inuu dhageysto, cabiro lana socdo codka macaamilka.
Xarunta Sirdoonka Macaamiisha Lithium wuxuu ku siinayaa aaladaha lagu falanqeeyo waxqabadka bulshada isla markaana loo abuuro kaqeybgal macmiil oo qoto dheer dhamaan Lithium Communities, Facebook, Twitter, iyo malaayiin goobood oo dhan shabakada bulshada. Waxaan isku darnay bulshada Analytics, warbaahinta bulshada Analytics, iyo kaqeybgalka warbaahinta bulshada hal, iskudhaf isku dhafan si loo fududeeyo in laga baxo fikradaha ilaa ficilka.
Ubucda xalinta kormeerka baraha bulshada ee Lithium waa muraayada shaashadda. Marka isticmaaluhu abuuro raadinta adoo adeegsanaya magaca calaamadda ama eray kasta oo kale oo muhiim ah, Lithium wuxuu tirtiraa shabakadaha kala duwan ee warbaahinta bulshada wuxuuna ka kooban yahay dashboardka liistada qoraallada ama xigashooyinka halka laga helay erayga muhiimka ah. Dashboard wuxuu kaloo bixiyaa garaafyada ku habboon Analytics natiijooyinka. Mashiinka wuxuu hayaa xogta waqtiga dhabta ah iyo xogta taariikhi ah wuxuuna daboolayaa in ka badan 100 milyan oo boggag, bogag wadaag ah sawir iyo fiidiyoow, bogagga wararka ee caadiga ah iyo shirarka marka lagu daro websaydhada caanka ah ee warbaahinta bulshada sida Facebook iyo Twitter.
Xogta baaritaanka, matoorka Lithium wuxuu ka soosaaraa ereyo sida rabitaan, rabto, jecel yahay, Iyo neceb si loola socdo dareenka si otomaatig ah. Suuqgeyntu waxay codsan kartaa hawl diidmo bini-aadam ah si ay u hagaajiso-u-habeynta raadinta dareenka noocaas ah. Waxa kale oo jira aragti wax-ku-ool ah oo u oggolaanaysa adeegsadaha inuu aqoonsado taageerayaasha iyo kuwa raacsan ee saamaynta ugu badan ku leh bulshada, taasoo kuu oggolaanaysa inaad fahanto cidda uu yahay macmiilku iyo saamaynta ay ku yeelan karto marka aad arrinta xalliso ama aad faallo ka bixiso ra'yi-celinta qaab ahaan way jeclaan lahaayeen oo way ku faafin jireen
Xitaa indho indheynta shaashadda ayaa u oggolaan doonta suuqyadu inay fahmaan dareenka guud ee macaamiisha. Daraasad faahfaahsan ayaa u oggolaan doonta suuqleyda in aysan sameynin oo keliya waxqabadyo ku habboon si ay ula macaamilaan macaamilka si wanaagsan oo ay u ilaaliyaan sumcadda laakiin sidoo kale waxay qeexayaan dhibaatooyinka asaasiga ah ee hannaanka ganacsiga. Tusaale ahaan, dareen diidmo ah oo ka imanaya aag juquraafiyeed gaar ah ayaa sababi kara kicinta nafta, taas oo aakhirka raadineysa dhibaatada gaarsiinta liidata!
Adoo adeegsanaya Sirdoonka Macaamiisha Lithium, waxaad:
Hagaajinta Waxqabadka Barnaamijyada Bulshada: Kordhi heerarka kaqeybgalka peerto-peer iyo hubinta ilaha ugufiican ee si toos ah ugajawaabaya qoraalada warbaahinta bulshada
Aqoonsiga oo Baro Saameeyayaasha: Ka dhig taageerayaasha superfans kuwaas oo u shaqeeya sidii kordhinta suuqgeyntaada, iibintaada, iyo kooxaha taageeradaada
Noqo Xarunta Fikradaha Bulshada: Fartaada ku hay mawduucyada mawduucyada kulul, aragtida sumadda, iyo waxqabadyada tartame
Faa'iidada Lithium waxay ka baxsan tahay kormeerka bulshada. Ku quudinta astaanta tartame erayga muhiimka ah waxay u oggolaaneysaa suuqleyda inuu fahmo sida macaamiisha iyo bulshada guud ay ula xiriiraan tartamayaashaada sidoo kale! Xitaa haddii aadan go'aansan inaad isticmaasho barnaamijkooda, hubi inaad iska hubiso tiirarkooda ilaha cajiibka ah ee baraha bulshada, saameyn, garaadka macaamiisha, iwm.
Rush Dahabka ah ee Goobaha Heerka Sare